Yan Aung: ဖောင်
တစ်ခါတစ်ရံမှာ မိုးရေစက်တွေက စည်းဝါးကိုက်ညီစွာ ကခုန်နေတဲ့ ကချေသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ပေါ်က တန်ဆာပလာတွေအချင်းချင်း ရိုက်ခတ်နေတဲ့ အသံလိုမျိုး... ချွင်.. ချွင်.. ဖျောက်..ဖျောက်... နဲ့..
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အခန်းထဲမှာ တိတ်တဆိတ်စာဖတ်နေတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ကို မနာလိုတဲ့ တစ္ဆေတစ်ကောင်ကပဲ ကိုယ့်မှန်တံခါးကို သူ့လက်သည်းနဲ့ လာပြီး ကုတ်ခြစ်နေတဲ့ အသံမျိုး... တောက်... ဖျောက်...ဖျောက်..တောက်..နဲ့...
မိုးရေစက်တွေထဲမှာ ရှင်သန်ခြင်းရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ ပူးဝင်နေတယ်.
ညက တိတ်ဆိတ်နေတယ်. ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အိမ်ခန်းတွေက မီးလုံးတွေ ကိုယ်စီမှေးမှိတ်ကြလို့ ညရဲ့ ပဉ္စလက်အတတ်မှာ မိန်းမူးမေ့မျောနေကြတယ်.
တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ အဝေးက ကြားရတဲ့ လူနာတင်ကားက ဥဩဆွဲသံလိုမျိုး၊ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်က ကပ်ပြီး ဆင်းသွားတဲ့ လေယာဉ်ဆင်းသံလိုမျိုး၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရထားတစ်စင်းရဲ့ ၀ုန်းဝုန်းဂျုံးဂျုံးအသံလိုမျိုး တစ်ချို့က လွဲရင် ညက ပကတိ အမှောင်ကျလို့... အပြစ်ကင်းစွာ (သို့မဟုတ်) ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းစွာ တိတ်ဆိတ်လို့...
ဒီအချိန်မှာပဲ မိုးရေစက်တွေက သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်နိုးထခြင်းတွေကို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ ကျူးရင့်သီဆိုနေကြတယ်.
ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို ရင်ဘတ်ပေါ် အသာမှောက်တင်လိုက်ပြီး ခေါင်းအုံးကို နံရံနဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားအောင် နေရာချလိုက်တယ်.
ပြီးတော့ ဘေးတစ်စောင်းအသာလေးမှီချလိုက်ပြီး ပြတင်းတံခါးအပြင်ဖက်က ဟိုး အမှောင်ထုကြီးထဲကို ရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာ ငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်...
သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်က တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညကို မရည်ရွယ်ဘဲ ပြက်ရယ်ပြုလိုက်မိတယ်...
ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ခရီးလည်း အတော်ရောက်ခဲ့ပြီ...
ဘာတွေကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီလဲ. ဘယ်လိုတွေ ခရီးဆက်နေလဲ... ဘာတွေကို ဦးတည်နေလဲ...
ဒီမေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးရတာ သိပ်တော့ မသက်သာလှဘူး...
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အမြဲမှတ်မိ သတိရနေမယ့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးတယ်.
ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာရဲ့ "နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ" သင်ခန်းစာပဲ...
အဲဒီ့တိုက်ပွဲမှာ ဘုရင့်နောင် ပြုမူပြောဆိုခဲ့ပုံတွေက ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကို အမြဲလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်.
အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ထက် အင်အားအဆမတန်ကြီးမားတဲ့ ရန်သူကို ရင်ဆိုင်ရာမှာ သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး နည်းဗျူဟာကိုပေါ့...
ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ တစ်ဖက်ကမ်းကို ကူးပြီးတာနဲ့ ရဲမက်ဗိုလ်ပါတွေစီးနင်းလာတဲ့ ဖောင်တွေ အကုန်လုံးကို ဖျက်ဆီးခိုင်းတယ်. အမတ်တွေက ကန့်ကွက်စကားဆိုပြီး အရေးကြုံသော် အသုံးမပြုရာလော လို့ စောဒကတက်ကြတယ်.
ဘုရင့်နောင်ပြန်ပြောတဲ့ စကားက ကိုယ့်ရင်ထဲကို စူးနစ်ဝင်သွားခဲ့တယ်.
"နောက်ပြန်ဆုတ်စရာ လမ်းစမရှိ၊ ကိုယ့်အသက်ရှင်သန်ဖို့ရာ အခွင့်အရေးကား တစ်ဖက်ရန်သူကို အနိုင်တိုက်နိုင်မှသာ ဖြစ်၍ ရဲမက်တို့ သက်စွန့်ကြိုးပမ်း အမှုတော် ထမ်းစိမ့်သောငှာ လှေဖောင်တို့ကို ဖျက်ပေ၏"
ဒီတိုက်ပွဲကို ဘုရင့်နောင် နိုင်ခဲ့တယ်.
ဒီသင်ခန်းစာကို စသင်ခဲ့ရတုန်းက ကိုယ်က မူလတန်းကျောင်းသားအရွယ်ပဲ ရှိခဲ့သေးတယ်. ဒါပေမယ့် ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထအောင် ဘုရင့်နောင်ရဲ့ နောင်ရိုးတိုက်ပွဲ သင်ခန်းစာကို နှစ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်.
ဒီလိုနဲ့ ဘ၀တစ်ကွေ့မှာ ဘုရင့်နောင်ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာကို အသုံးပြုခွင့် ကြုံကြိုက်လာခဲ့တယ်.
တစ်အိမ်လုံးရဲ့ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို ရွေးချယ်တက်ခွင့်ရတာကိုကပဲ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကို ပိုပြီး အားကောင်းလာစေခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်.
နေ့စဉ်သင်နေရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေထဲမှာ အာရုံအပြည့်နှစ်ထားလို့...
ဒုတိယနှစ်မှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖြေဆိုမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံပညာတော်သင် ကိစ္စကို အပြည့်အ၀ဦးတည်ချက်ထားလို့...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျောင်းတွေ အကန့်အသတ်မရှိ ပိတ်ခဲ့တယ်.
ကျောင်းပိတ်သွားတဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာ တတ်နိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြီး ပညာကို ဆက်လက်သင်ယူကြလို့..
တစ်ချို့ကလည်း ရန်ကုန်ကို ဆင်းပြီး ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေ တက်ခါ ကျောင်းကို သိပ်ပြီး ဦးတည်ချက်မထားတော့ဘဲ အဆင်ပြေသလို ကျင်လည်နေကြလို့...
ကိုယ်ကတော့ သန္နိဌာန်ပြင်းပြစွာနဲ့ပဲ မန္တလေးမှာ ရအောင်နေခဲ့တယ်.
အပြင်အလုပ်လုပ်ရင် ကိုယ့်အတွက် အချိန်မရှိမှာစိုးလို့ဆိုပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားတွေကို စာပြပေးတဲ့အလုပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်.
အားတဲ့အချိန်တွေမှာ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်မှာ မှတ်စုစာအုပ်လေးနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်လို့၊ ညနေခင်းတွေမှာ နန်းရှေ့က ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဂျပန်စကားပြောနဲ့ သဒ္ဒါကို အပတ်တကုတ် လေ့ကျက်သင်ယူလို့...
ကိုယ့်ရဲ့ Roll No. ကလည်း အိုကေတယ်. ဂျပန်စကားပြော ကျွမ်းကျင်အဆင့်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်.
နှစ်တွေအတော်ကြာတဲ့နောက် ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်. ကျောင်းကို ပြန်သွားပြီး ဂျပန်ပညာတော်သင်ဆုအကြောင်း စုံစမ်းမိချိန်မှာ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ပြိုကျသွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်.
ပညာတော်သင်ဆု အစီအစဉ် မရှိတော့ဘူးတဲ့...
အဲဒီ့တုန်းက မန္တလေးကျုံးဘေးက ခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်ပြီး အသံတိတ်ကြေကွဲနေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ ကိုယ့်မျက်ရည်တွေကို ဘယ်သူမှ မသိမမြင်ခဲ့ဘူး...
အိမ်ပြန်လာတော့ ကိုယ်ဖတ်မှတ်လေ့လာနေဆဲ ဂျပန်စာအုပ်လေးတွေကို နောက်ဆုံးအကြိမ် အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်.
သံသေတ္တာအနီလေးရဲ့ ဟိုးအောက်ဖက်နားမှာ ကိုယ် သုံးနှစ်သုံးမိုးလေ့လာသင်ယူခဲ့တဲ့ ဂျပန်စကားပြောစာအုပ်လေးတွေ၊ သဒ္ဒါစာအုပ်လေးတွေ၊ အဘိဓာန်လေးတွေ တိတ်ဆိတ်စွာ အနားယူသွားခဲ့တယ်...
ဒီနေရာကို ပြန်မလာတော့ဘူး... ဒီကျောင်းကြီးကိုလည်း ဆက်မတက်ချင်တော့ဘူး.
နောက်လ အနည်းငယ်အကြာမှာ ရန်ကုန်ကို အပြီး ပြောင်းခဲ့တယ်. ကွန်ပြူတာသင်တန်းတစ်ခုမှာ စာရင်းသွင်းပြီး ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကို ပရိုဂရမ်တွေ ရေးတဲ့ဖက် ပြောင်းယူခဲ့တယ်.
သင်တန်း ဒုတိယအဆင့်ပြီးချိန်မှာပဲ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ပြုလုပ်တဲ့ ရေးဖြေစာမေးပွဲကို လက်တည့်စမ်းဝင်ဖြေကြည့်တယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး. ကိုယ့်ကိုသင်ပေးတဲ့ ဆရာလည်း မယုံနိုင်ခဲ့ဘူး.
ရေးဖြေပြီးတော့ နှုတ်ဖြေအင်တာဗျူးအဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်အလုပ်ရခဲ့တယ်.
တစ်ပတ်လုပ်ပြီးတော့ ကိုယ်ထွက်စာပြန်တင်ခဲ့တယ်. ကန့်သက်ချက်တွေများလွန်းတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်အစွမ်းအစတွေကို မပေးဆပ်နိုင်ဘူး. ပြီးတော့ ကိုယ့်ခွန်ကိုယ်အားနဲ့ သွားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုကို သူတို့ပို့မှ ရောက်ပြီး တစ်သက်လုံး သူတို့ကို ပြန်အလုပ်အကျွေးပြုနေရတာမျိုး ကိုယ်မဖြစ်ချင်ဘူး..
ကန်တော်ကြီးဘေးက ရေပြင်ကျယ်ကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း အလုပ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့နေ့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးပြီး ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်.
"ငါဟာ လိုချင်တာကို ထိုက်တန်စွာ ပေးဆပ်ကြိုးစားပြီး ရအောင်ယူတတ်သလို ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုက ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေပါစေ ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ လူသားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်"
ကုမ္ပဏီအလုပ်ကထွက်ပြီး ကွန်ပြူတာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ဆရာဝင်လုပ်ရင်း ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာနေခဲ့တယ်.
ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာ အဖေက မျက်ကွယ်ပြုသွားခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပြီ. အမေကလည်း အိမ်ထောင်ရှင်မ စစ်စစ်... သားသမီးတွေကို ချစ်ဖို့၊ ဂရုစိုက်ဖို့၊ ကြင်နာဖို့... ဒါကလွဲရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေ အမေနားမလည်ဘူး. သိလည်းမသိဘူး.
ဒါပေမယ့် အမေပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီ့ ချစ်ခြင်းကြင်နာမှုတွေနဲ့ပဲ ကိုယ် ဒီလောကကြီးကို စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်... ဒီ့ထက်ပိုပြီး အမေဘာမှ လုပ်ပေးစရာမလိုဘူး. ကိုယ့်ကို ချစ်ကြည်မြတ်နိုး ယုံမှတ်ကိုးစားတဲ့ အမေ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ပဲ ကိုယ် တိုက်ပွဲအလီလီအတွက် အသင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်.
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ ကိုယ်လို ငမွဲအတွက် နိုင်ငံခြားကို ကျောင်းသွားတက်ရဖို့ဆိုတာလည်း ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လို အထိနာခဲ့ဖူးပြီ...
တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကိုလည်း ပြန်မသွားချင်တော့ဘူး. သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အလုပ်လေးလုပ်လိုက်၊ ကျောင်းလေးပြေးတက်လိုက်၊ စာမေးပွဲလေးဖြေလိုက်နဲ့ အတန်းတွေ တစ်တန်းပြီးတစ်တန်းတက်လာနေကြတယ်.
သူငယ်ချင်းတစ်ချို့ကတော့ စင်ကာပူကိုထွက်ပြီး ကျောင်းဆက်တက်ကြတယ်.
စင်ကာပူကို ကျောင်းသွားတက်ဖို့အတွက် သင်တန်းတွေတက်နေစဉ်မှာပဲ ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိနေသေးပါလားဆိုတာ ကိုယ်သိလာခဲ့ရတယ်.
အဲဒီ့အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်ဘာလိုမလဲ. ကိုယ်ဘာတွေ ပေးဆပ်ရမလဲ စုံစမ်းတယ်. လေ့လာတယ်. မေးမြန်းတယ်. စူးစမ်းတယ်.
အိုကေ... ဒါလား.. ရတယ်.. ဒီဥစ္စာလား... ဖြစ်တယ်. အကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ရှိမလဲ... ဒီလိုဒီလိုရှိတယ်.
အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတိုင်ပင်ကြည့်တယ်. သူကတော့ မယုတ်မလွန်ပြောပါတယ်.
စင်ကာပူကို ကျောင်းသွားတက်ဖို့ဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံး နောက်နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်. အဲဒီ့နိုင်ငံဖက်ကိုလုပ်ရင်တော့ တစ်ခြားစာမေးပွဲတွေ ထပ်ဖြေရမှာနဲ့ဆိုရင် နောက်ထပ်သုံးနှစ်လောက် ကြာသွားနိုင်တယ်..
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ့စကားကို သူပြောလိုက်ချိန်မှာ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့က (၄၅) ကားကြီးပေါ်မှာ အတူတူစီးလာလို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှေ့ကို ရောက်နေချိန်...
အဝေးမှာ မြင်နေရတဲ့ လေးဆူဓာတ်ပုံရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို စိတ်ထဲက ဦးချရှိခိုးလိုက်ရင်း ရင်ဘတ်ထဲကို မာန်သွင်းလိုက်တယ်.
ဗီဇာရဖို့ သိပ်ခက်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုကို ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကို ရူးနှမ်းပြီး လက်တွေ့မဆန်တဲ့အကြံတစ်ခုလို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောလာရင် ကိုယ်စိတ်မဆိုးဘူး. သူပြောတာမှန်တယ်.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ် ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ ရူးသွပ်စွာ ကြိုးစားခဲ့လို့ပဲ...
မနက်ခင်း အိပ်ယာထ ရေတစ်ခွက်သောက်ချိန်မှာ ရေခွက်နားပါးစပ်တေ့လို့ ကိုယ်ဒီလိုပြောခဲ့ဖူးတယ်.
"ငါ တိုဖယ်လ် ၆၀၀ ကျော်ရမယ်. အမေရိကားရောက်ရမယ်."
ည အိပ်ယာဝင်ခါနီး အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေချိန်မှာ ရင်ဘတ်ပေါ် လက်နှစ်ဖက်ယှက်တင်လို့ လက်မလေးနှစ်ခုကို ထိထားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြားရုံလောက်အသံလေးနဲ့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်.
"ငါ စကောလားရှစ် ရရမယ်. အမေရိကားရောက်ရမယ်."
သူများတွေ အကြံပြုသလို အုန်းမှုတ်ခွက်မတီးခဲ့ဘူး. ဗေဒင်တွေ ယတြာတွေ မချေခဲ့ဘူး.
ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အားနဲ့ပဲ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်.
ကိုယ့်ကို မာနကြီးတယ်လို့ တစ်ချို့က ပြောတယ်.
ကိုယ့်မှာ ဥစ္စာမရှိဘူး.. အသိုင်းအ၀ိုင်းမရှိဘူး.. အထောက်အပံ့မရှိဘူး.
ဒါပေမယ့် အောက်ကျနောက်ကျမခံချင်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်. မာန်ရှိတယ်.
ငါလိုချင်တာကို ငါရအောင်ကြိုးစားယူမယ်ဆိုတဲ့ မာနရှိတယ်.
ဒီမာနမျိုး မရှိသင့်ဘူးလား.. ဒီမာန်မျိုး မထားသင့်ဘူးလား...
ဒီမာန်ကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားမြှင့်တင်တတ်သလို ဒီမာန်ကို ထိပါးစော်ကားလာသူတွေကိုလည်း ကိုယ့်ဘ၀ထဲက အပြီးအပိုင် ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်သည်အထိ ကိုယ်က အငြိုးအတေးကြီးတယ်.
သူများတွေနဲ့ တန်းတူ ပညာတော်သင်ဆုတွေ ကိုယ်ရခဲ့တယ်. ဒါပေမယ့် စိုက်ထုတ်ရမယ့် ပမာဏများလို့ ဗီဇာမ၀င်ဖြစ်ခဲ့ဘူး.
သုံးနှစ်အကြာမှာ စိတ်ကြိုက်ကျောင်းတစ်ခုကို ၀င်ခွင့်ရတယ်. ပညာတော်သင်ဆုလည်း အပြည့်နီးပါးရတယ်. ဒါကြောင့် အဲဒီ့ကျောင်းကို ရွေးချယ်ပြီး ဗီဇာဝင်ခဲ့တယ်.
အဲဒီ့နေ့က မှတ်မှတ်ရရ မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေ ကျနေခဲ့တယ်...
ဖိုင်တွဲအဖြူရောင်လေးကို ကိုင်လို့ အဓိပတိလမ်းမကြီးအတိုင်း လမ်းလျှောက်နေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ကိုယ် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျမနေခဲ့ဘူး..
ကောင်းကင်ပေါ်က ကျဆင်းလာနေတဲ့ မိုးရေစက်တွေကို ဆီးကြိုဖို့..
ပြီးတော့ ကိုယ့်မျက်ရည်ပူတွေနဲ့အတူတူ အဓိပတိလမ်းမကြီးပေါ်ကို ဖြတ်စီးဆင်းသွားစေနိုင်ဖို့....
အဲဒီ့နေ့က အဓိပတိလမ်းမကြီးအတိုင်း ခေါင်းကိုမော့လို့၊ ဖိုင်တွဲလေးကို လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားလို့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်ကြီးဖက်ကို လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်...
ကိုယ်နဲ့အတူတူ ဗီဇာမရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ချို့က ပြောတယ်.
တော်ပါပြီ. တစ်ခြားနိုင်ငံကိုပဲ သွားတော့မယ်. အဲဒီ့ဖက်ကို ခွလျှောက်ထားတာ တော်သေးတယ် တဲ့...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးမိတယ်. မင်း အဲဒီ့နိုင်ငံတွေဖက်ကို ကျောင်းမလျှောက်ထားမိတာ မှန်သလား မှားသလားလို့...
တုံဆိုင်းမနေဘဲ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲက တုံ့ပြန်တယ်.
"တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကို ခွပြီး ကျောင်းမလျှောက်ခဲ့တာ မှန်တယ်. မင်းဖောင်ဖျက်ခဲ့တာ မှန်တယ်. မင်း ဒီနိုင်ငံကိုပဲ ရောက်အောင် ထပ်ကြိုးစားရမယ်."
အဲဒီ့နေ့က မိုးရေစက်တွေက အေးစက်နေပေမယ့် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့ ပူလောင်နေခဲ့တယ်.
တစ်စစီ ပြိုကွဲသွားတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်တွေကို ဘာသာတရားနဲ့ ပြန်လည်စုစည်းပြီး နောက် တစ်လအကြာမှာ ဗီဇာပြန်ဝင်ခဲ့တယ်. နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ကိုယ့်ကို အရင်တစ်ခါ ငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်စစ်ဝန်နဲ့ပဲ ပြန်တွေ့တယ်.
ဒီတစ်ခါလည်း ငြင်းပယ်ဖို့ ကြိုးစားပြန်တယ်.
ဗီဇာဝင်တဲ့အခါ ဘာမေးရင် ဘာပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာတွေ ကိုယ့်ဖြစ်ရပ်မှာ အကျုံးမ၀င်တော့ဘူး...
ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ကိုယ်ပဲ အကောင်းဆုံးသိတယ်.
ကောင်စစ်ဝန်နဲ့ အချေအတင်စကားပြောနေချိန်မှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက အသင့်အနေအထားနဲ့ ကိုယ့်ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်.
ဟင့်အင်း... သူတို့ ငါ့ကို မနိုင်စေရတော့ဘူး...
ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ ငါ့အခွင့်အရေးအတွက် ငါရအောင် တိုက်ပွဲဝင်မယ်....
ကိုယ်တင်ပြတဲ့ ထုချေလွှာကို သေချာမဖတ်ဘဲ ကိုယ့်ကို ငြင်းဆန်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်စစ်ဝန်ကို စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ ကိုယ်စကားစစ်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်.
နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိုင်တွဲကို အထက်ကို တင်ပြမယ်ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်.
နောက် နှစ်ရက်လောက်နေတော့ ကိုယ် ဗီဇာလာယူရတယ်.
အိမ်ကို ပြန်ရောက်တော့ အစ်မက စိုးရိမ်တကြီးမေးတာကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်ဖြေပြီး မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်သွားခဲ့လိုက်တယ်.
"ကောင်ဆယ်လာက ကျွန်တော့်ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်.."
အစ်မခမျာ သနားစရာ... မျက်နှာကို ပျက်သွားလို့...
ပါးစပ်က ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောပြီး ကိုယ့်ကိုဆူတယ်.
"နင်က ဘာတွေ သွားပြောလဲမှ မသိတာ... စိတ်ညစ်ပါတယ်ဟယ်..." ဆိုတဲ့ အသံလေးကို ခုထိကြားယောင်နေမိတယ်.
တကယ်တော့ မိသားစုထက် ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့သူ၊ ချစ်ကြင်နာတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါလားဆိုတာကို နားလည်လိုက်မိတယ်.
ကိုယ့်ဖိုင်တွဲကို မွှေနှောက်ရှာဖွေနေတဲ့ အစ်မတစ်ယောက် ခဏနေတော့ အသံကုန်ဟစ်အော်လိုက်သံကို ကြားလိုက်ရတယ်.
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ကိတ်မုန့်တစ်ချပ်ကို လှီးစားနေရင်း နောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ ကိုယ်အားရပါးရ ပြုံးနေမိခဲ့တယ်.
လမ်းထဲမှာ ခေါင်းလောင်းသံတွေ ဆူညံသွားခဲ့တယ်.
"အမေ... အမေ... အမေ့သား ဗီဇာရပြီ....ဒီမှာကြည့်..."
အစ်မနောက်က ကပ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ်ဖက်လမ်းက တိုက်ခန်းပေါ်က အမေနဲ့ အစ်မကြီးတို့ရဲ့ မျက်နှာအပြောင်းအလဲကို အရသာခံပြီး ကြည့်နေမိခဲ့တယ်.
အဲဒီ့နေ့ညက ကိုယ်တို့မိသားစု ခေါက်ဆွဲကြော်ရယ်၊ ကြက်သားချိုချဉ်ကြော်ရယ် ၀ယ်စားပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်.
ညဖက်ကျတော့ အားလုံးအိပ်သွားချိန်မှာ အဖေဆယ်တုန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ဆုရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်စာအုပ်လေးကိုထုတ်၊ စာမျက်နှာတစ်နေရာမှာ ညှပ်ထားတဲ့ အဖေ့ဓာတ်ပုံလေးကို ထုတ်ကြည့်ရင်း ဗီဇာတံဆိပ်တုံးထုထားတဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး ဒိုင်ယာရီထဲမှာ စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကို ရိုးရှင်းစွာရေးခဲ့ဖူးတယ်..
"ကျွန်တော် ဗီဇာရပြီ အဖေ..."
လျှပ်စီးနဲ့ အတူ တွဲပါလာတဲ့ မိုးခြိမ်းသံက သူ့အတွေးစများကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်...
အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ ရေတယောက်မှ မိုးရေတို့က တဝေါဝေါနဲ့ အောက်ကို ကျဆင်းနေသည်...
ကားလမ်းမဖက်သို့ စီးဆင်းသွားသော မိုးရေတို့ကြားထဲတွင် သစ်တိုသစ်စလေးများကို တွေ့ရသည်...
ထိုအရာများသည် သူဖြတ်သန်းလာသော ဘ၀လမ်းတလျှောက် ချိုးဖျက်ခဲ့သည့် သစ်ဖောင်များကို ကိုယ်စားပြုနေသည်ဟု ခံစားလာမိသည်...
ဒီနိုင်ငံကို လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဖောင်ဖျက်ပြီး ကြိုးစားခဲ့သည်...
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့လည်း ရည်မှန်းချက် အဆင့်ဆင့်အတွက် ဖောင်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်. ချိုးဖျက်ခဲ့သည်...
ရှေ့တွင် ကမ်းတစ်ခုကို ခပ်ရေးရေးမြင်ရသည်... လျှပ်စီးမိုးကြိုးများလက်ခနဲ အဖြစ်တွင် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်းက ခြောက်ခြားဖွယ် ကောင်းလှသည်...
အရှေ့ဖက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကုန်းမြေပေါ်တွင် ရန်သူ ဆူးငြောင့် ခလုတ်ကန်သင်းတို့က ဒင်းကြမ်းပြည့်နှက်နေလျက်...
အနောက်ဖက်ကို မျှော်ကြည့်လိုက်တော့လည်း ခက်ထရော်ထန်နေသည့် ပင်လယ်ဝဲဂယက်တို့က ဟီးဟီးဟားဟား မြည်ကြွေးလျက်...
မိုးရေစက်တို့က သူ့မျက်နှာကို ပြေးဝင်ဆီးပက်သည်...
ကမ်းခြေဖက်သုိ့ ၀ံ့စားစွာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်...
ဘ၀ချွေးစက်တို့ဖြင့် စေးထန်းနေသော လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော မာန်ဟုန်ဓားကို အားမာန်အပြည့်ဖြင့် သူ မြှောက်လိုက်သည်...
လျှပ်စီးက လက်ခနဲ... ဓားသွားက ၀င့်ခနဲ... ၀ါးဖောင်ကို ချည်ထားသော လျှော်ကြိုးတို့က တိခနဲ...
"မင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ငါကမ်းတက်ခဲ့ပြီ လောကဓံရေ...."
သုံးနှစ်ကြီးများတောင်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင် အစ်ကို ဂျပန်စာ အတော်ရမှာပေ့ါ။ ခုတော့ စိတ်နာလို့ မေ့များကုန်ပြီလားမသိဘူး။ နှမြောစရာကြီး....
ခွန်လည်း စကော်လာမရဘဲနဲ့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ချည်းဆို ဒီနေရာ လာနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။
ခံစားချက်တစ်ခုကြောင့် ရေးတယ်ဆိုတာ သိတယ်
ဖောင်ဖျက်နိုင်ဖို့က တော်ယုံစိတ်မျိုးနဲ့ မရဘူးရယ်နော်..။ လေးစားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကြိုးစားနေဆဲ..။
ဘယ်နေရာမှာ မဆို ဖောင်ဖျက်ပစ်မှ ရှေ့တိုးရတာ ပိုပြီး လွတ်လပ်သလို ခံစားရစေတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။
လူငယ်တွေ အတူယူသင့်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ မြင်မိတယ်
လောကမှာ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့သူတွေသာ နေရာရစမြဲပါ။
Congratulations!Bro!I can't find any words to say how I feel.